चितवन मेडिकल कलेजको अबैध असुली र रहस्यमयी मौनता » Chitwan Samachar - चितवन समाचार
चितवन मेडिकल कलेजको अबैध असुली र रहस्यमयी मौनता
-चितवन समाचार | २६ भाद्र २०७६, बिहीबार १७:४६ |
चितवन मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस पढ्ने बिद्यार्थि हरुले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै गरेको आन्दोलनबाट प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष नेत्र बिक्रम चन्द का छोरा प्रकाश चन्द सहित १५ जना बिहीवार पक्राउ परेपछी केही हद सम्म भए पनि चितवन मेडिकल कलेज ले गरिरहेको लुट बारे केही मानिसहरुको ध्यानाकर्षण भयो । यस अघि पनि त्यहाँ अध्ययनरत बिद्यार्थि हरुले पटक पटक विभिन्न स्वरुपमा आन्दोलन गरे पनि यस बारे न कसैले सुन्यो , न त यस वारे कसैको ध्यानाकर्षण भयो । बिद्यार्थी र अभिभावक भित्र भित्रै पिल्सनु र आफ्नै आँखा अगाडि भैइरहेको लुट को साक्षी बन्नु बाहेक कुनै बिकल्प रहेन उनिहरु सामु !! जब प्रकाश चन्द पक्राउ परे अनि धेर थोर भएपनी यस प्रती मानिसहरुको चासो गयो । भलै प्रकाश सहित सबै रिहा भैसकेका छन् ।
यो बर्शको बिद्यार्थि भर्नाको शुरुवात देखिनै यो पंक्तिकार पनि चितवन मेडिकल कलेज ले गरिरहेको लुट बारे साक्षी छ । एक जना विद्यार्थीले सरकार ले तोकेको दर अनुसार शुल्क बुझाएर जब एड्मिसन लगायत अन्य आबश्यक प्रकृयाका लागि कलेज गयो तब उ सङ थप १२ लाख ५० हजार रुपियाँ माग गरियो । र तत्काल ६ लाख २५ हजार बुझाउन भनियो । संयोगले ती बिद्यार्थि पक्तिकारको नजिकको चिनजानको मान्छे भएका कारण के भएको रहेछ भनेर बुझ्न उनका अभिभाबक सङै कलेज पुगेको थियो । त्यतिबेला कलेजका प्रशासन प्रमुख अरुण कोईराला ले भनेका थिए ” सरकारले तोकेको रेटमा हामी पढाउन सक्दैनौ , एक्स्ट्रा चार्ज नलिकन हाम्रो लगानी नै उठ्दैन ।” उनले पक्तिकारकै अघि ती अभिभावक सङ प्रस्ट भनेका थिए ,” थप रकम अर्थात ६ लाख५० हजार नबुझाई हामी बिद्यार्थी पढाउन सक्दैनौ ! यो मेडिकल कलेज एशोशियशन को पनि निर्णय हो ।” उनले अझै भनेका थिए , “तपाईं जहाँ गए पनि केही हुने वाला छैन,यो हाम्रो नियम नै हो ।” उनले पछि लिने भनिएको एक्स्ट्रा रकम को रसिद भने कुनै हालत मा दिन नसकिने बताएका थिए ।” उनले त्यसो भनिसके पछि मैले आफ्नो परिचय दिँदा आफ्नो बाध्यतालाई बुझिदिन उनले आग्रह गरे !
अहिले फेरि बिद्यार्थीहरुले यो मुद्दाको उठान गरेका छन् ।बढी शुल्क लिन पाइदैन , सरकारले तोकेको शुल्क लेउ , निमुखा , सोझा र गरिब र मध्यमबर्गिय नागरिक माथी शोषण नगर, अनेक बहानामा शुल्क उठाउन पाईदैन भन्दै शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका डाक्टरी पढ्ने बिद्यार्थी माथी प्रहरीले लाठि चार्ज गर्दै पक्राउ गरेर थुन्नु कतिको जायज कुरा हो। के यो बिद्यार्थी र अभिभावक माथी अन्न्याय होइन ? यो लोकतन्त्र हो कि लुट्तन्त्र हो ? जहाँ राज्यनै सहायक भएर खुलम खुला लुट्न छुट दिईरहेको छ , यसको जबाफ प्रशासन ले दिन पर्छकी पर्दैन ? सबै भन्दा गजब र अचम्मको कुरा त के छ भने जब आफ्ना हक हित र अधिकारका लागि विद्यार्थी हरु आन्दोलन गर्दै गर्दा प्रहरिको कुटाई खाँदै हिरासत सम्म पुगे त्योबेला आफुलाई बिद्यार्थीहरुको मसिहा सम्झने विद्यार्थी संगठन हरु मौन थिए । कुनै पनि विद्यार्थी संगठन चुक्क समेत बोलेनन् ।आन्दोलनको नेतृत्व जस्ले सुकै गरेको होस् त्यहाँ बिसुद्द शैक्षिक माग थियो भन्ने कुरा आफुलाई विद्यार्थी संगठनको नेता हुँ भन्नेको दिमागमा घुसेन कि पैसा , पावर र प्रभाबको अघि सबै नैतिकता बिक्री भयो ?? विद्यार्थी संघठनहरुले यसको जबाफ दिन पर्छकी पर्दैन ? केही विद्यार्थी नेताले तँ कुटे जस्तो गर् म रोए जस्तो गर्छु भनेर भद्दा अभिनय गरेपनी त्यसलाई लाज जोगाउन गरिएको अभिनय भन्दा अरु केही मान्न सकिन्न । विद्यार्थी भर्नाको शुरूवात देखिनै देखिएको यो समस्या वारे सबै विद्यार्थी संघठनलाई राम्रो सङ था छ , तर उनिहरुले यो बारेमा चुक्क सम्म नबोल्नु अत्यन्तै लाजमर्दो कुरा हो । यो समग्र विद्यार्थी आन्दोलन र अहिले सम्म प्राप्त गरेको उपलब्धि कै धज्जी उडाउने काम हो । धेरै पैसा तिर्न बाध्य र आफुहरुको कुरा सुनुवाई नहुदा निराश भएका विद्यार्थी हरुले सबै विद्यार्थी संघठन पनि पैसामा बिक्री भए भनेर भन्न थालेका छन् , के त्यस्तै हो ? यदि यो हो भने ठूलो दुर्भाग्य हो । विद्यार्थी आन्दोलन कै बदनाम हो । त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौ बाँकी कुरा संघठनहरुले दिने रिजल्टमा भर पर्छ ।
अर्को तर्फ जिल्लाका राजनितिक दलहरुले समेत यो बिसयमा चुक्क बोलेका छैनन् ! यहाँ बाट निर्बाचित जनप्रतिनिधि हरु समेत मौन छन् । जता ततै यो बिशयमा सबै मौन मात्र देखिन्छ । सरकारी निकाय , अनुगमन गर्ने संयन्त्र सबै मौन छन् । यस्तो किन भएको होला ? यसको सफा र सिधा उत्तर छ , पैसा , पावर र प्रभाब !
चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एबम् प्रबन्ध निर्देशक हरिश्चन्द्र न्यौपानेको पहुँच सिधा माथी सम्म छ , यो सबैलाई था भएकै कुरा हो । उनले पैसाको बलमा आफ्नो प्रभाव यसरी बिस्तार गरेका छन् कि उनको बिरुद्द्मा कोहि चुक्क बोल्न सक्दैन । उनको कलेजले शक्तिकै आडमा कतिपय गैरकानुनी काम लाई समेत बैध बनाईदिन्छ । अहिले कलेज ले गरेको अबैध असुली यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । अबैध हो भन्ने सबैलाई था छ तर कोहि बोल्न सक्दैन कारण न्यौपानेको पहुँच नै हो । राजनितिक दललाई चन्दा पाइदैन भन्ने डर , सरकारी सेवक लाई सरुवा , घटुवा र दुर्गम को डर यो केही उदाहरण मात्र हो जे होस् न्यौपाने र चितवन मेडिकल कलेज ले सबैको चित्त बुझाएकै छन् । त्यसकारण पनि सोझा साझा विद्यार्थी र अभिभावकहरुको आवाज सुनिएको छैन । प्रहरी लगाएर उनिहरुको आवाजलाई दबाउने कोसिस गरिएको छ ।
चितवन मेडिकल ककेजको अबैध असुलिको बारेमा कोहि पनि नबोल्नु र मौन रहनु आफैमा रहस्यमयी कुरा हो यस बारेमा माथी पनि धेरै चर्चा गरिसके । यो सबै लोभ , लालच र त्रासको कारण भएको हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। केही बुज्रुकहरुलाई यस बारेमा भन्दा अन्त कलेज ले नि लिएका छन् रे हामी मात्र किन बोल्नु भनेर पन्छिन खोज्छन् , ती बुज्रुकलाई मेरो भन्नू के छ भने चितवन छुट्टै पहिचान बोकेको जिल्ला हो , ठुला ठुला परिबर्तनका कुरा र कन्ट्रोभर्सी का कुरा पनि यहि भएका छन् । त्यसकारण यस्तो अबैध असुलि र गैरकानुनी हर्कतका बारेमा पनि यहि बाट आवाज बुलन्द पार्नु पर्ने होईन र ? कति दिन लोभ , लालच र त्रास बस्ने ?
अन्त्यमा , एक जना सामजिक अभियन्ता प्रेम रिमालले फेसबुकमा गरेको पोस्ट जसले मेरो मन छोयो त्यसलाई यहाँ पनि शेयर गर्न चाहन्छु :
कराैडाैंकाे ठगी दुईचार सय डेङ्गे परीक्षणका कीट सित्तीमा दिएपछि माफ हुने हाे ?
सरकार म घाेषणा गर्छु मेडिकल कलेजले गरेकाे लूट नियन्त्रण गर्ने हिम्मत गर म पाँच हजार डेङ्गे परीक्षणकाे कीट जुटाइदिन्छु । हजाराैं अभिभावकहरूलाई लुटेर केही विरामीकाे रगत जचाइदिन्छु भन्नेलाई धन्यवाद हाे भने कुरा प्रष्ट छ ठगहरूकाे पहुँच धेरै माथि छ ।
हामी सामान्य स्कुल चलाएर बसेका मान्छेहरू नर्सलाई सरकारी तलव भनेर विज्ञापन गर्छाैं तर अाफै अठार बीस लाख हसुर्ने अनि नर्सलाई छ महिना सित्तिमा काम लगाउने,त्यसपछि दशअाठ हजार हातमा हाल्दिने । के याे भ्रष्टाचार हाेइन ? मेडिकल अफिसर ( जाेसँग अहिले ६०/७० लाख लिने गरेका छन् पढाउन ) लाई १८/२० हजार दिएर लदाइरहेका छन् ।
जेल जान तयार हुनुपर्छ , पछि हट्ने हाेइन । यस्ताे ब्रम्हलूटका विरूद्धमा सबै एकजुट हुनुपर्छ ।
( लेखक बस्ताकोटी चितवनका क्रियाशिल पत्रकार हुन् )